Ny toe-panahy miatrika izao fiainan-tsarotra izao.
Tsy afaka hamokatra na hisedra ny ady isika raha tsy tonga amin’ny fahalehibiazana ara-panahy . Izany fahalebiazana izany di any famantarana ny anjara toerana misy antsika eo amin’ny ratsam-batan’i Kristy.
Ny zavatra izay mandalo eo amin’ny fiainantsika dia karazana dingana azahoantsika manatona an’Andriamanitra mba hitady vahaolana fa tsy manantona olona. Ny fifandraisanao sy Andriamanitra no takiana eto, izay vao afaka mitombo. Indraindray mety ela na mafy vao mahazo valim-bavaka fa tsy maninona. Andriamanitra mihaino antsika. Rehefa misy zavatra manahirana amin’izao vanin’andro iainantsika izay akatoky ny fiavian’i Tompo, dia manaova tahaka ny vavak’i Jakoba : « Tsy havelako handeha Hianao, raha tsy tahinao aho. » Genesisy 32:27
2 Tantara 16 : 9 « Fa ny mason’ i Jehovah mijery eny tontolo eny eran’ ny tany rehetra, mba hisehoany aman-kery hamonjy izay manana fo mahitsy aminy. Adala hianao tamin’ izany, ka dia hisy ady hahazo anao hatramin’ izao. »
Mpitoriteny 12 : 13 « Ary rehefa re izany rehetra izany, dia izao no faran’ ny teny : Andriamanitra no atahory, ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony hataon’ ny olona rehetra. »
Jeremia 1 : 17 : « Fa hianao kosa dia misikìna, ary miomàna, ka lazao aminy izao rehetra andidiako anao izao; aza matahotra ireo, fandrao dia hataoko raiki-tahotra eo anatrehany hianao. »
Andriamanitra mila sy mijery olona ho vavolombelona, izay sahy mijoro hatramin’ny farany ny amin’ny fahamarina’ny filazantsara.
Te hampiseho ny heriny Izy amin’ny toerana misy antsika.
Inona ny tahotra an’Andriamanitra :
Tahotra noho ny fitiavana: voalaza ao amin’ny Mpitoriteny dia ny hoe Jehovah no atahory. Matoa ny olona mbola manao “compromis” dia satria tsy matahotra an’Andriamanitra izy fa ny olombelona. Andriamanitra nilaza ao amin’ny Deoteronomia 6 : 5 “ tiava an’ i Jehovah Andriamanitrao amin’ ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra.”
Ny olona tena tiana no atahorana (ohatra ny mpivady). Matoa tsy matahotra an’Andriamanitra dia tsy tia an’Andriamanitra (mandainga)
=> Mankatoa, manaiky an’Andriamanitra mba tsy handrava ilay fihavanana Aminy, mba hitoetra mandrakariva eo amin’ny fahasoavany.
Tahotra noho ny fahamarinany : Mino fa Andriamanitra dia marina, ary ny teniny rehetra izay nambarany dia tsy maintsy ho tanterahiny. Rehefa miteny Andriamanitra fa hiatrika fitsarana isika dia marina izany. Voalaza ao amin’I Jaona 3 : 36 “ Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay; fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran’ Andriamanitra no mitoetra eo aminy.” 1 samoela 2:10“…ary izay manamavo Ahy no ho afa-baraka.” Andriamanitra no atahory fa tsy ny olona. Mitady olona Andriamanitra, te haneho ny heriny Izy.
Matoa matahotra dia ao anatintsika ny tsy finoana. Moa misy zava-mahagaga izay tsy hain’I Jehovah va ?
Ao amin’i Jeremia dia milaza hoe aza matahotra ireny, izany hoe aza matahotra ny devoly sy ny fampihorohorona ary ny loza => Moa misy zava-mahagaga izay tsy hain’I Jehovah va ?
Manana fahasahiana manao hoe : manomboka androany dia ariako ny tahotra an’izao tontolo izao fa anomboka atahotra Anao kosa aho Andriamanitra.
Mitaky fitiavana Azy izany : mitarika fitandremam-pitondran-tena, ny teny izay aloaky ny vava…
Mitady olona Andriamanitra anehoany ny heriny. Iza no vonona hankatoa ny tenin’Andriamanitra ?
Matahora ary matokia Azy tanteraka. Manana fahasahiana hijoro vavolombelona.
Apokalipsy 2:10 “ Aoka ho mahatoky hatramin’ ny fahafatesana hianao, dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana.”
Tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay Andriamanitra (Hebreo 13:8) fa manana fahasahiana.
Esory ao anatinao ny tahotra an’izao tontolo izao sy ny fanahiana rehetra.
Raha tena tia an’Andriamanitra dia asehoy amin’ny tahotra Azy, eo amin’ny fanompoana Azy, eo amin’ny fitondran-tena, eo amin’ny fanaovana ny asa rehetra.
Vavaka atao : Inty aho Tompo ô, anehoy ny herinao androany mba tena ho tsapako fa tena marina ny teninao. Tompo ô, apetraho amiko ny fahatahorana Anao (Isaia 11:1-2).
Matoa ny olona tsy matahotra an’Andriamanitra dia tsy ao anatiny ny Fanahy Masina.